कसरी भाइरल भयो करीना कपूरले सुशांतको कसम खाएकाे भिडियो ? ( भिडियो सहित ) - VOICE OF NEPAL
९ असार २०७७, मंगलवार १५:१४
205 ??? ???????
सुशांत सिंह राजपूतको आत्मह’त्याको र, हस्य अहिले सम्म खुलिएको छैन तर धेरै व्यक्तिले सोशल मिडियामा बिभिन्न थियरी दिइरहेका छन्। सोशल मिडियाको एक विभागको मान्यता छ कि फिल्म पृष्ठभूमि अभावका कारण सुशांत सिंह राजपूतले आफूलाई राम्रो अभिनेताका रूपमा स्थापित गरे पनि ठीक व्यवहार गरेनन।
धेरै व्यक्तिको विश्वास छ कि सुशांतको आत्मह’त्याको लागि जिम्मेदार भतीजावाद र केही बलिउड स्टारहरूको पुतलाहरू पनि बिहारमा जलाइएको छ। यसैबीच, करीना कपूर खानको एक भिडियो पनि भाइरल भइरहेको छ, जसको सहयोगमा यो भनिन्छ कि सुशान्त कहिल्यै इन्डस्ट्रीमा अपनाइएको थिएन।
अमृता अरोड़ा शोको होस्ट थिइन्। उनले करीनालाई सोधिन् कि सारा अली खानको लागि उनले के भनेकी छिन्? यसमा बोल्दै करीनाले भनिन कि उनले आफ्नो पहिलो हीरो डेट गर्नु हुँदैन। महत्त्वपूर्ण कुरा, सारा अली खानको पहिलो फिल्म केदारनाथ थियो, जसमा उनी सुशांत सिंह राजपूतको बिरू’द्ध देखा पर्‍यो।
यो जवाफ दिंदा, करीना पनि एक धेरै निर्दोष अनुहार बनाई। यो भिडियो सोशल मिडियामा भाइरल भइरहेको छ र केहि प्रशंसकहरु भन्छन् कि यो भिडियोबाट सुशांतलाई उद्योगमा कसरी व्यवहार गरियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । प्रशंसकहरुका अनुसार सुशांत सिंह राजपूत बाह्य मानिसका कारण कहिल्यै पनि उद्योगमा अपनाएनन्।
वर्कफ्रन्टको बारेमा कुरा गर्दै करीना आमिर खानसँग फिल्म लाल सिंह चड्ढामा काम गर्दैछिन् । फिल्म हलिउड सुपरहिट फिल्म वन गम्पको आधिकारिक हिंदी रीमेक हो। आमिर खान फिल्मको लागि धेरै पसिना पसीरहेका छन् र उनी यस फिल्ममा धेरै लुकमा देखिनेछन्। यस बाहेक, करीनासँग करण जौहरको फिल्म पनि छ। यो मल्टिस्ट्रारर परियोजनाको नाम तख्त हो। यस अवधिमा नाटक फिल्ममा विक्की कौशल, जाह्नवी कपूर, आलिया भट्ट, अनिल कपूर, रणवीर सिंह र भूमि पेडनेकर जस्ता स्टारहरू पनि प्रस्तुत गरिने छ। भिडियो